> Resource> Igwefoto> n'ụzọ ọ bụla na-agbake Photos si Nikon Igwefoto
Nikon ese foto na-ewu ewu ruo ọtụtụ afọ. The enwekwa nka, elu àgwà, na bughi nkwarụ adọta a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị mmadụ. Anya na ugbu a Nikon D90, ọrụ na-akpali mmasị na ya pụrụ iche image mmetụta. Ma ka anyị nwere ike izute image na ọnwụ n'ihi na ndị na-esonụ: na mberede ihichapụ, formatting, virus agha, na-atụghị anya ike anya, na ihe ndị ọzọ dị ka incompatibility nke kaadị. Bụ n'ebe ọ bụla ụzọ naghachi foto site na Nikon igwefoto?
N'ezie na e nwere ọtụtụ ụzọ dị iche iche na-agbake photos. Ka ihe atụ, na-arịọ enyemaka si enyi gburugburu, ma ha pụrụ ileghara ụfọdụ nkọwa; aga foto mgbake ọkachamara ma ọ bụ ụlọ ọrụ, kama ga-a obere na-eri. Lee otu onye ọkachamara na pụrụ ịdabere na ụzọ bụ Nikon foto mgbake software. Mgbe photos furu, data onwe ya na-adịghị ehichapụ; dị nnọọ ebe ndị furu efu photos e echekwara ugbu a akara dị ka free ohere maka ọzọ ọhụrụ faịlụ ka e dere. Photo mgbake software nwere ike iṅomi ebe ndị a na-agbake furu efu photos. Ebe a na-3 mkpa Atụmatụ mkpa ịṅa ntị tupu n'ịrụ Nikon foto mgbake.
Olee otú naghachi furu efu foto site na Nikon ese foto
Get a ọkachamara Nikon foto mgbake mbụ: Wondershare Photo Recovery (dakọtara na Windows 8/7 / Vista / XP) ma ọ bụ Wondershare Photo Recovery for Mac.
Download free ikpe version n'okpuru nwere a na-agbalị ugbu a. Unu na-ahọrọ nri version maka kọmputa gị usoro.
Wondershare Photo Recovery Bụ pụrụ ịdabere na foto mgbake software nke nwere ike mfe naghachi foto site ọ bụla igwefoto na mma mma. Ọ dịghị ihe ọ bụla mgbake nkà mkpa. Ike mgbake ikike-enyere gị aka naghachi furu efu oyiyi si n'ozuzu image ọnwụ ọnọdụ.
Naanị 3 mfe nzọụkwụ ịrụ foto mgbake
1. Jikọọ igwefoto ma ọ bụ na kaadị ebe nchekwa gị na kọmputa, ẹkedori omume na "Malite" gị Nikon igwefoto foto mgbake.
2. Họrọ gị Nikon igwefoto ka iṅomi.
3. Preview recoverable photos na-agbake ha.
Video nkuzi nke Nikon igwefoto foto mgbake
3 mkpa Atụmatụ kwesịrị nọ n'uche tupu n'ịrụ foto mgbake
1. Zere data overwriting: Egbula ọzọ oyiyi ma ọ bụ ndị ọzọ data na otu ebe ebe furu efu oyiyi e echekwara, ma aga na free ohere ga-overwritten site ndị ọzọ, nke na-eme Nikon foto mgbake siri ike ọbụna na ọrụ mgbake software.
Ozugbo ị chọta foto gị nwere ike na-natara, adịghị azọpụta ha n'otu ebe ahụ furu efu oyiyi e echekwara. Ka ihe atụ, ọ bụrụ na ị chọrọ iji naghachi foto site na nkebi H :, ị kwesịrị ị na-ezipụta a nchekwa ịzọpụta foto na nkebi E: ma ọ bụ ndị ọzọ na nkebi, ọ bụghị nkebi H :.
2. Na-nchekwa na ngwaọrụ ọma: Nọgidenụ na-ọma gị igwefoto ma ọ bụ na kaadị. N'ozuzu mgbe nchekwa na ngwaọrụ osobo ezi uche mmebi dị ka reformatting ma ọ bụ n'amaghị ama nhichapụ, nke furu efu data bụ recoverable. Ma mgbe ọ ezute anụ ahụ mmebi dị ka n'ebe elu okpomọkụ, idobe, cracking, ma ọ bụ mmiri mebiri, data ga-ukwuu yiri unrecoverable.
3. Họrọ ihe kwesịrị ekwesị Nikon foto mgbake software: Ma mụ onwe m, kwesịrị ekwesị software kwesịrị inwe atụmatụ ndị a: ọkachamara na ike mgbake ọrụ, na-mma na a pụrụ ịdabere, elu ndakọrịta na keisompi price.